प्रधानमन्त्री सर अब मेरो बिहे हुन्छ ! – Pokhara Voice
प्रधानमन्त्री सर अब मेरो बिहे हुन्छ !
प्रधानमन्त्री देखी नायीका सम्म उनको एउटै अनुरोध थियो मेरो विवाह गरिदेउ
By Ghanashyam Lamichhane	 On ५ माघ २०७६, आईतवार १३:२५
पोखरा ५, माघ
२०६६ मंसिर १९ गते आईतवार गिनिजवुक अफ वर्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाउन जाने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाउदै उनको प्रधानमन्त्रीको काखमा वसे । प्रधानमन्त्रीको चस्मा र गाला मुसार्दै खगेन्द्रले भने–“अव मेरो विवाह हुन्छ ?” फरक खालको रमाईलो भएको प्रधानमन्धमन्त्री कार्यालय एकाएक हासोको फोहोरा छुट्यो ।
त्यसको भोलीपल्ट सोमवार उनको विषयमा निर्माण गर्न लागिएको वृत्तचित्र छायंकन पछि तत्कालिन चल्तीकी नायीका रेखा थापालाई पनि भेट । उनको काखमा वस्दै लगातार मुख जोडेर किस गर्दै खगेन्द्रले भने–“म सँग विहे गर्छयौ ?” प्रति उत्तरमा रेखाले भनिन–“ तपाई वेलायतवाट आए पछि विवाह गरौला है, लभ यु माई डियर ।” त्यस पछि उनले विवाहको योजना सुनाए । म सँग धेरै पैसा छ हातभरी औठी किनिदिन्छु अनि मासु र भात पनि खान दिन्छु ।”
वाग्लुङको विकट धुल्लुवासकोट–६मा जन्मेका थापामगर कमजोर आर्थिक अवस्थाको परिवारमा जन्मेका थिए , त्यसैले पनि उनको लागि मासु र औठी सहज रुपमा पाईने वस्तुको रुपमा थिएन । उनि १६ वर्षको भए पछि सपरिवार पोखाराको श्रृजनाचोकका मिनवहादुरको घरमा वस्न थाले पछि उनि मिडिया सामु परे जसको कारण गिनिज वुक अफ वर्ड रेकर्डमा पनि उनको चर्चा चल्यो ।
अन्ततः ५७ सेन्टिमिटर अर्थात् २२ दशमलव ४ इन्च उचाइ भएका थापामगरले २०६७ असोज २८ मा विश्वकै होचा व्यक्तिको रुपमा ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्स’ मा नाम लेखाउन सफल भएका थिए ।
त्यस पछिका समयमा संसारभरका सामान्य मानिहरुका लागि सेलिव्रटी वनेका थापामगर मेला महोत्सवमा समेत प्रमुख आर्कषणको केन्द्र वने फल स्वरुप उनले केहि पैसा पाउन पनि थाले । त्यस पछि उनको परिवारको जिवनस्तर पनि केहि सहज वनेको थियो । मेला महोत्सव वा अन्यत्र पनि थापामगरको एउटै प्रश्न हुन्थ्यो मेरो विहे हुन्छ ? सवैले रमाईलो मानी उनलाई केहि पैसा पनि दिन्थे अनि पैसा समाउने निउमा महिलाहरुको हातमा किस पनि गरिदिन्थे ।
उनै रमाईला र विश्वमा नै नेपालको नाम राखेका थापामगर हिजो वाट हामी माझ रहेनन् । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि थापामगरलाई बिहीबार अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मणिपाल अस्पतालको सघन उपचारकक्ष (आईसीयू) मा भर्ना भएका थापा मगरको शुक्रबार दिउँसो ३ बजे निधन भएको हो । थापामगरको निधन निमोनियाका कारण भएको चिकित्सकले बताएका छन् । २०४९ साल असोज १८ गते जन्मिँदा छ सय ग्राम मात्र थियो भने अहिलेको तौल ५ दशमलव ५ किलोग्राम मात्र रहेको थियो ।